शनिबार काठमाडौंमा आयोजित पार्टी कार्यकर्ता भेलामा ओलीले एमसिसीमा सत्ता गठबन्धनको धारणा मागे । ‘यिनै मान्छेहरु हुन् कांग्रेस र माओवादी भएका बेला एमसिसी गरे । अहिले एमसिसीमा बोल्दैनन् । झुक्याएर पास गर्न खोज्या छ ।
के गर्ने हो भन्दैनन् । जनताका अगाडि यिनीहरुले गरेको एमसीसी के गर्ने ? देउवाजी, प्रचण्डजी बोल्नुपर्दैन । के गर्ने एमसीसी ? उहाँहरु चुपचाप हुनुहुन्छ। यस्ता अनगिन्ती कुराहरु गोप्य राखेर नेपाली जनतालाई छक्याएर अघि बढ्न खोजेका छन्,’ उनले भने ।